Yini okufanele ngiyenze phakathi nomjikelezo wesizini? - Ukuhamba Ngebhayisikili
Main > Ukuhamba Ngebhayisikili > Ukuqeqeshwa kokuhamba ngebhayisikili kwesizini - izimpendulo ezivamile
Ukuqeqeshwa kokuhamba ngebhayisikili kwesizini - izimpendulo ezivamile
Yini okufanele ngiyenze phakathi nomjikelezo wesizini?
Faka i-crossfit, ukugijima noma ukuhamba izintaba noma ukushibilika eqhweni nanoma yini enye ongase uthokozele ukuyenza futhi okugcwalisayoukuhamba ngebhayisikili. Lokhu kubalulekile njengoba kwakha amandla omzimba agcwele okungenzeka ulahlekile ngesikhathi somjahoinkathi.22.10.2015
(ithoni yokuqhuma) - Siyakwamukela ku-Ask GCN Anything. - Yebo, futhi kuleli sonto sikhuluma ngalokho okwenziwa ngo-off-season, ukuthi ungazivocavoca kanjani umzimba isikhashana, nokuthi ungazitholela kanjani ama-monster quads njengawethu ukuthola uJohn Travolta. (umculo omnandi) - Ungasasho, uma ufuna ithuba lokuwina okubhaliselwe kwamahhala kwezinyanga ezi-3 kuZwift ukuqala ukuqala ukuqeqeshwa kwakho ebusika bese uphawula nje usebenzisa i-hashtag, buza i-GCN nanoma yini enye imibuzo Kufanele usethe kabusha i-hashtag Torque - yebo kunjalo qiniseka ukuthi uyithumela esigabeni sokuphawula ngezansi.
Ngakwesokudla, ngicabanga ukuthi u-Ollie kufanele sibhekane nombuzo wokuqala, futhi uvela eMarcus Castle. (ehleka) ubungasho kanjalo. Ngaphandle kwe-yoga, abagibeli bamabhayisikili abangochwepheshe basebenzisa njalo izivivinyo zamabhayisikili ukusekela ukuqeqeshwa kwabo, njengokugijima noma ukubhukuda. - Yebo, lowo ngumbuzo omuhle impela, futhi impendulo elula inguyebo, bayakwenza.
Futhi lokho kungenxa yomphumela wokuqeqeshwa okuphambene. Futhi lokho kwamukelwa kabanzi ngabasubathi bakweminye imidlalo futhi, bangakwazi ukugibela ibhayisikili uma bengabadlali bebhola lombhoxo, ngokwesibonelo. Futhi umqondo osemuva kwakho ukuthi uzinika ikhefu ngokwengqondo kulo mdlalo ochitha isikhathi sakho esiningi-- amahora namahora ngosuku. - Yebo, futhi uzenza umsubathi oqinile, osebenza nxazonke ngokusebenzisa imisipha namaqembu emisipha obungeke uwasebenzisele ukwenza nje kuphela umdlalo wakho okhethekile, ozinikele.
UPeter Sagan muhle. Wenza i-yoga eningi, isibonelo - Yebo, empeleni udume ngokukhohlwa ezikhundleni ze-craziest. (ehleka) - Uma usho njalo.
Ngiphinde ngaba nengxoxo no-Alejandro Valverdea eminyakeni embalwa eyedlule wangitshela ukuthi wenze ukushushuluza okuningi enqamula izwe ngesikhathi sokuqala sonyaka - O, lokho kuyathakazelisa - Yebo, ukhuphuka izintaba nakho konke lokho - Futhi ungakhohlwa, Thibaut iqale iPinot kule sizini empeleni ngaphandle komcimbi wokuhamba ngebhayisikili, empeleni ngomcimbi onqamula izwe. Ngakho-ke unayo. Ngezwa ukuthi lokhu kunzima kakhulu, angikaze ngikwenze ngaphambili. - Yebo, kulungile, kuhle kakhulu, kepha kuhle. - Ngakho-ke unayo, ochwepheshe abaningi benza ezinye izivivinyo eziningi ukuze bazigcine befanelekile.
Ngakwesokudla, umbuzo olandelayo uqhamuka kuReny. Ngihlala endaweni ethile inamagquma futhi cishe ngingenawo amafulethi. Ukukhuphuka kwe-Sprint kusasebenza, futhi i-HIIT- Iseshini emele ukuqeqeshwa kwesikhawu esiphakeme lapho yehluka kakhulu ngobude? Eminye imizuzwana emihlanu kuphela cishe cishe umzuzu - Yebo, kahle, 100%.
Ngenkathi ngiziqeqeshela inkathi yezintaba, ngangivame ukuthola amagquma amancane engiziqeqeshela wona njengoba unenkani ongazivikela ngayo ngandlela thile. Futhi izikhathi ze-HIIT, ngombono wami, zenziwa kahle ekukhuphukeni okufushane. Engingakwenza kungukuthola umqansa ongcono kakhulu endaweni yakithi bese ngiyiphinda nje.
Ngakho-ke ngingasho izikhathi ezintathu noma ezine kuseshini eyodwa kulokhu kukhuphuka bese ngenza iluphu elincane ukuthola ukumelana bese wenza into efanayo. - Lokhu kuyathakazelisa, uthanda ukukhuphuka uphinde wehle ekukhuphukeni okufanayo? - Yebo - ngiqonde ukuthi yonke into yehlela kum m.
Kepha yebo. - Ungahlela umzila onezintaba ezahlukahlukene kuwo.- Yebo, yenza lokho ngokujwayelekile.
Ngibheka umzila bese ngivele ngivele ngiphume ngokuphelele kukho konke ukukhuphuka bese ukululama kwami ​​kuphakathi kwalabo abakhuphukayo - Yebo, imvamisa, yebo, ngakho-ke uhlobo oluhle kakhulu lwesikhawu kungaba yisikhawu sesitayela se-Tabata HIIT, esivame ukuba njalo cishe imizuzu emine kuya kwemihlanu ubude. Ungazenza zibe zinde, kepha kungcono ukuzigcina zimfushane futhi wenze okuningi. Uma ngabe ubenza okuthile okufana nemizuzwana engama-20 yokumpintsha okugcwele phezulu egqumeni, bese kuthi imizuzwana eyi-10 yokuphumula okulula kepha okusebenzayo, bese kuba yimizuzwana engama-20 yokuphenduka okugcwele.
Ukuphinde lokho imizuzu emine noma imizuzu emihlanu, ngemuva kwalokho kufanele uzizwe ugula kwesinye salezi zikhathi. Kepha lolu uhlobo oluhle kakhulu lweseshini ye-HIIT. Ngakho-ke uma unokwenyuka eduze kwakho, uthi okukhulu kunakho konke umzuzu, ngingathi zama ukuthola umqansa osele kancane bese ugxila esimisweni sakho kuso Isikhathi se-Ollie HIIT.
Ngakho-ke ophumelele isibonelelo sezinyanga ezintathu saleli sonto esivela kuZwift nguBram Mennen, ngalo mbuzo, iyiphi indlela engcono yokuziqeqesha ngesivivinyo sesikhathi esithatha kuphela imizuzu eyi-10? Bengihlelela isilingo sesikhathi emasontweni ayisithupha futhi bengizibuza ukuthi sizoba yini isikhathi esihle kakhulu seZwift ngakho? ucabanga u-Ollie? - Well, Bram, izindaba ezimnandi lapha ukuthi kujwayele ukuthatha amasonto ayisithupha ukubona noma yikuphi ukuthuthuka ekusebenzeni-- Kuyiqiniso impela. - Ngakho-ke kusuka ekuzivocavoca kwakho, lokhu kukufanele. Ngokwesilingo sesikhathi esingapheli cishe imizuzu eyi-10, into ebaluleke kakhulu ofuna ukuyithuthukisa lapha ukubekezelela kwakho i-lactate kanye ne-VO2 yakho ephezulu ngoba uqoqa i-lactate eningi ngesikhathi semizuzu eyi-10 noma ukuzikhandla kwemizuzu eyi-10. lokho kuyiqiniso impela.
Futhi njengenjwayelo, sithumela umbuzo wethu kuZwift futhi babuya nokuzivocavoca okukufanele ngempela, kusho bona. Ngakho-ke lokhu kungukuzivocavoca abasithumelele kona futhi kubizwa ngokuthi yi-TT tuning. Futhi lokho kuthatha cishe amasonto amahlanu kuya kwayisishiyagalombili, ngakho-ke kuyavumelana nohlelo lwakho oluhleliwe.
Isonto lokuqala lokubheka le mizamo ye-anaerobic, okungukuthi, imizamo ethatha imizuzwana engama-30 kuye kwangama-60 ngokululama okude. Bese kuthi isigaba esiphakathi esibheka lezo zikhathi zokudla okuphezulu ze-lactate ezihlala cishe imizuzu emibili futhi sisebenza kweminye imibundu. Futhi isigaba sokugcina sohlelo esibheka leyo mizamo ephezulu ye-VO2.
Futhi lokho kufanele kukungenise esivivinyweni sesikhathi semizuzu eyi-10 kahle impela - Yebo, sazise ukuthi unjani.- Yebo, futhi ujabulele lezi zinyanga ezintathu.
Njengamanje ngisebenzisa i-lubricant eyomile ye-ceramic esheshayo eketheni lami futhi bengicabanga ukusebenzisa i-wax esikhundleni, abantu abathi isebenza kahle futhi akudingeki uhlanze uchungechunge lwakho kaningi. Kungaba ngcono ukusebenzisa i-wax noma i-lubricant eyomile? Umbuzo onentshisekelo ngoba ngizwe okuningi ngokuqala kwezigcobisi ze-wax nokuthi zisebenza kahle kangakanani.
Angikaze ngisebenzise ioyisi yokuthambisa ngaphambili, kepha ngiyazi wena umngani wami. Ngakho-ke tshela uPaul ukuthi enzeni. - Ngingumlandeli omkhulu we-lube - ngithemba ukuthi ukhona.
Ngikhuluma ngakho --- ngisebenzise okokuthambisa okomile kwejubane le-ceramic kanye nenkinga ngalolo thambisa nezinye izithambisi eziningi ezomile ezigezwa kalula uma kunomswakama emgwaqeni noma uma lina isitimela sedrayivu esingasebenzi kahle nesomile. Ukhiye usegameni, izinto zokugcoba ezomile ezizosetshenziswa ezimweni ezomile. Ama-Wax angasebenza kahle futhi asebenze kahle, futhi uma ungena emaqinisweni wokushayisana ungabona ukusebenza okuhlukile kokuthambisa ngokuzimela kuze kufike kuma-watts ayi-10, akunjalo? - Yebo, ngeketanga le-wax ungenza uchungechunge lwakho lusebenze kahle kakhulu, ngilusebenzise esivivinyweni sesikhathi.
Kepha ngivame ukuphuma endleleni yokuxhuma iketanga ngilithole, kufanele liphelele, kufanele lingabi nasici, lingenasici ngokuphelele ngaphambi kokufaka i-wax, ngaphandle kwalokho alikho iphuzu. Futhi inenzuzo, kepha ngizoyenzela le micimbi ebalulekile. Njengomjaho noma isivivinyo sesikhathi lapho ngifuna ukwenza kahle khona.
Uma kukhona umswakama, ngizosebenzisa igrisi emanzi. Ngokuqondene r Uma ngishayela e-UK ebusika imigwaqo imbozwe udoti nomquba futhi lina kakhulu, ngizovele ngisebenzise i-lubricant emanzi. Ngoba iyanamathela kuketanga futhi isebenza kahle.
Ayisebenzi kangako kune-lube elungiselelwe, kepha ngokubanzi isebenza kahle kakhulu ngoba ihlala lapho futhi ayivele ihehe inqwaba yenhlabathi - ngakho-ke ngokuyisisekelo sithi, kungani ungakhethi umjaho noma umcimbi futhi bese ubuka ukhula? Chain bese uya kulokho okulondolozwe yi-watt, noma vele usebenzise i-lube yakho ejwayelekile ngesikhathi sokuzivocavoca - impendulo emfushane inguyebo, uchungechunge lwe-wax lunganikeza izinzuzo ezinkulu ngokuya ngokusebenza kahle kokudonsa kodwa kuthatha umzamo omncane, iketanga lakho lidinga pristine ngakho-ke ubasindisele izinsuku ezinkulu. - Yebo, lapho uya khona, futhi uma ubufuna ngempela ukufunda ukukhulisa uchungechunge lwakho, uJohn uhamba nje nawe lapha, ngakho-ke bhekani i-athikili lapha - Iketanga legolide futhi. - Manje njengoba i-wax yakho incibilikile kufanele yehlisa ijubane y Yehlisa iketanga ungene emgodini we-wax bese ulivumela lime cishe imizuzu engama-20 noma kuze kungabe kusaba khona amabhamuza amancane avela ezixhumanisweni nasezigingqikithini zeketanga - Umbuzo olandelayo uvela kuPaul Cook obhala athi: Sawubona GCN, ngifuna okwami ​​Ngithuthukise ukuhamba ngebhayisikili ebusika ukuze ngisheshe futhi ngiqine kwezemidlalo kwisizini ezayo.
Anginaye umqeqeshi wasendlini, ngigibela ibhayisikili lami ngisebenze cishe izinsuku ezintathu ngesonto futhi cishe amakhilomitha ayishumi ukuya ngakunye kuze kufike emahoreni amathathu njalo ngempelasonto, kodwa ngaphandle kwalesi sikhathi anginaso nesikhathi sokuziqeqesha. Yisiphi iseluleko onganginika sona ukukhulisa umzamo wami wokuzivocavoca umzimba? UHarry Potter noma okuthize. Noma kunjalo, buyela embuzweni, yebo, ngingasho ukuthi ukwandisa uhambo lwakho lokuya emsebenzini, futhi mhlawumbe ukwenze kube nzima kakhulu, ukuze uthole okuningi ngeseshini emfushane.
Ngakho-ke ungenza kanzima imizuzu eyi-10 bese wenza imizuzu emihlanu nje, ngoba lapho-ke uzobeka iseshini ethile yokuhamba lapho uhamba. Futhi uma uthola ngokushesha nangamandla, isikhathi eside ungakwenza kube yinde. Ngakho-ke uthi, vuka ngaphambi kwesikhathi bese wenze uhhafu wehora, noma, yebo, ubuya emsebenzini bese ungeza enye iluphu, yebo, lapho uzobona inqubekela phambili ethile - yebo, ngicabanga, cabanga kuqala ngiyakholelwa ukuthi leli nani lokuhamba ngebhayisikili, lelo volumu likhulu futhi ukungaguquguquki kuhlala kuyisihluthulelo kunoma yikuphi ukuzivocavoca.
Ngakho-ke uma ungahlala njalo kulungile ngingahlongoza ukuthi ufake ezinye zokuhamba kwakho ekuseni njengokugibela okusheshayo. Ngakho-ke umqondo ukuthi ungasidla ibhulakufesi ngokushesha lapho ufika emsebenzini kunakuqala, futhi lokho kungaba nezinzuzo ezithile zokuzivocavoca kwakho nokuqina komzimba. - Uma ubufuna ukungena ujule ekutheni ungaziqeqesha kanjani ohambweni lokuya emsebenzini, ngicabanga ukuthi u-Emma wenze i-athikili nje, ngakho-ke hlola lokhu - Uziqeqesha kanjani imicimbi emide, eyinselele yokuhamba ngebhayisikili lapho isikhathi sifushane? Ngiqonde ukuthi, uhambo olude ludla isikhathi ngencazelo.
Kodwa-ke, ukuzila ukudla kungakunika ezinye izinzuzo zokungalungi kwedrayivu ende, okungenani ngokukhuthazela, esikhathini esincane kakhulu. - Manje sesisesekelweni lomlilo elisheshayo. Ngakho-ke ngidonse u-Ollie ukuze ngibone nje ukuthi uhamba ngokushesha kangakanani kuluphu womlilo osheshayo.
Ngoba uDani, kahle, uhamba kancane. UChris ushesha kakhulu kanti uSi naye uhamba kancane. Ngakho-ke ake sibone ukuthi uqhubeka kanjani nalokhu.
Noma kunjalo, umbuzo wokuqala ovela kuLiam Sanguku. Sangaku. Sangaku, ungasho? - Yebo - Yebo, kuhle.
Sizoyithola nini inethiwekhi yamabhayisikili ethrekhi yomhlaba? - Cha, hhayi esikhathini esizayo esiseduze - Yebo, kodwa mina - - Ungalokothi uthi ungalokothi - Yebo, bengifuna ukusho, ungasho ukuthi angikaze ngoba ngingathanda ukuphuma emzileni bese ubuyela ezimpandeni zami. Ngakho-ke, bheka isiteshi futhi ngethemba lokuthi uzobona ezinye izindatshana zethu emabhodini. Umbuzo olandelayo, ngubani u-Ollie? - Ivela ku-Ed TJ, futhi uthi, ngabe kukhona okubhekwayo okugwema ukulimaza ibhayisikili lakho ekugibeleni umqeqeshi we-turbo? Ngiyabonga. - Umbuzo omuhle.
Ibhayisikili lakho aliklanyelwe i-static turbo. Ngakho-ke mhlawumbe ungashayi ibhayisikili? Ukubeka ukulayishwa ohlangothini nohlangothi ezingxenyeni zohlaka ezingasetshenziswanga ukucindezelwa futhi ezingakhelwanga ngempela ukumelana nalokho kuxabana kungenzeka kukufanele. Ngakho-ke mhlawumbe ungaqapha kancane nge-sprinting yakho noma ngokuzikhandla kwakho ngaphezulu kwephubhu yekhanda lakho langaphambili futhi lokho kuzogcina ukujuluka nosawoti kungangeni kuma-bearings akho ngoba yebo, akukuhle uma uhlukanisa amabheringi akho futhi, yebo, kugcwele kasawoti nomjuluko.- Yebo, usawoti ungalimaza amabhere.
Kukho konke, noma kunjalo, angikaze ngizwe ngakho, bantu, kufana nohlobo oluthile lwenganekwane yasemadolobheni, angikaze ngizwe ngebhayisikili eligqabhuka empeleni uma ushayela nge-turbo - Yebo, angikaze, mina, Angikaze ngibe nale nkinga, angikaze ngibe nale nkinga. Umbuzo olandelayo uvela ku-Anant Uno. Ngithola kanjani ama-monster quads njengoJohn Travolta? Yebo lowo ngumbuzo onentshisekelo, futhi uma ngikhuluma iqiniso, angicabangi ukuthi mina no-Ollie yimi okufanele sikutshele-- ngingathanda ukwazi - Yebo, ungawathola kanjani lawo ma-monster quads kodwa ngicabanga ukuthi track isitrint Sprint, indawo yokufaneleka.
Ngakho-ke sikhuluma ngokuqeqeshwa okuningi ejimini kanye naleyo mizamo emifushane ye-sprint yokusebenzela leyo misipha esheshayo ekhulayo futhi oyitholayo, yebo - okunye kwalokho kuyizakhi zofuzo, njenge-naja. . - Njengokungathi nginezinwele ezincane ezijiyile ngokwezakhi zofuzo. (uyahleka) Kepha yebo, abanye abantu banezakhi zofuzo ezinemisipha ethe xaxa, kuya ngomzimba wakho - Kodwa okubi ukuthi une-quads enkulu kufanele uthole i-jean eyenziwe yafanela.
amabhayisikili e-walmart ahlanganisiwe
NjengoChris Hoy, angazi ukuthi ingena kanjani kuma-skinny jean - Yebo, angazi. Noma kunjalo - Yebo, lapho unayo - Umbuzo ovela ku-AP - Yiluphi uhlelo lokuqeqesha iZwift okufanele ngilulandele ukukhulisa amandla ami emizuzu emi-5? - Umbuzo othokozisayo, ngenze ucwaningo oluncane ngathola lokhu Futhi ngiye ngaya kokunye kokuzivocavoca kwe-GCN, ngaya esimisweni se-VO2 max, esikunikeza umzamo onzima wemizuzu emithathu ngokululama kwemizuzu emine time, futhi kufanele ikusize Ngempela ngokuzikhandla kwamandla kwemizuzu emihlanu yebo sazise ukuthi uqhuba kanjani esigabeni sokuphawula ngezansi - yebo, kunalokho wena kunami, AP, kulokhu - ngizokwenza ukwenze kamuva, ngethembe uzoyithanda. - Okulandelayo Sinombuzo ovela ku-Nine PSI.
Ngiyethemba ufaka kakhulu amathayi akhe. (ehleka kancane) - Yebo. Kungani amabhayisikili engakhanyanga ngemali efanayo kule minyaka eyi-15 edlule, noma kukhona engikulahlekile? Umbuzo onentshisekelo - Ngicabanga ukuthi ulahlekelwe okuthile, noma kukhona abakulahlekile. - Bese usitshele - - Ngicabanga ukuthi amabhayisikili alula kakhulu.
Lokho kungokokuqala. Isibonelo, bheka --- Zilula futhi zithole i-aerodynamic ethe xaxa, akunjalo? - Yebo, amabhayisekili aba lula, amabhayisikili abengathengwa manje eminyakeni eyi-15 eyedlule, bekuyivelakancane ukuba nebhayisikili elinesisindo esingu-6.8kg, uyabona umkhawulo wethu manje, maningi impela. - Futhi awenzanga yini ngebhayisikili ukuthi bekuyini lokho? - 4.28 kg. - 4.28 kilos - Umfana naye wakha ibhayisikili lakhe, kunodaba olumayelana nalo.
Okunye futhi ukuthi ngenkathi kunamabhayisikili alula noma afana namabhayisikili aneminyaka eyishumi ubudala, asebenze kangcono kakhulu. Ngakho-ke bangeze isisindo sokusebenza, bakwenza kwaqina, bakwenza kwaba namandla e-aerodynamic. Ngakho-ke yize ziyisisindo esifanayo, basebenzise okokusebenza okwengeziwe futhi benza ibhayisikili lisheshe lapho lapho unakho.
Amabhayisikili empeleni angamabhayisikili angcono futhi alula. Amabhayisikili asheshayo nesisindo esifanayo futhi. Manje sesiphelile kokuthi Buza i-GCN Anything.
Futhi uma ufuna ukubuza imibuzo yakho ngesonto elizayo, khumbula ukusebenzisa i-Ask GCN Training hashtag kuyo yonke imibuzo yakho eqondene nokuqeqeshwa futhi ube nethuba lokuwina okubhaliselwe kwezinyanga ezintathu kuZwift. Futhi nganoma yimiphi eminye imibuzo eqondene nokuhamba ngebhayisikili, sebenzisa i-hashtag toque back bese uyibhala esigabeni sokuphawula ngezansi. - Yebo, iBlack Friday isiphelile - Izikhathi ezidabukisayo, umlingani - Kodwa uKhisimusi useduze.
Ngakho-ke uma usesimweni sokugcina izinto noma izipho zikaKhisimusi, isitolo se-GCN sinokuningi esitokweni - yebo, ungathola izandla zakho kokunye kwalokhu, futhi lena - noma, izinkomishi, zilungele iwayini elinemilindelo okwamanje - yebo, nokugcwalisa okuhle kokugcina impahla, ha? - Yebo, futhi uma uyijabulele le ndatshana, wayithola ilusizo, uyakwazi okufanele ukwenze. Izithupha, bhalisa, futhi ukuthola enye i-athikili, kungani ungabukeli ukugibela okuyindumezulu e-Oman. - Bheka lolu hambo oludumile ongafinyelela noma kuphi lapho. - I-OP Quadzilla nePhuli. - Yebo, ukudubula kwelanga okumangazayo kule.
Kuhamba isikhathi esingakanani ngebhayisikili ngenkathi yesizini?
Ngokuvamile, isonto 2 4off isiziniimvamisa kwanele ukuvumela abasubathi abaningi ithuba lokululama futhi bazilayishe kabusha balungele ukubuyela phakathi kwalo.26.09.2016
Benzani abagibeli bamabhayisikili besizini ngenkathi engekho?
Ukusuka ekushayeni olwandle kuya ezintabeni ukuwela eqhweni unqamula izwe, ukukhetha ezinye izindlela zokuvivinya umzimba kubanzi kakhulu njengokuthiabagibeli bamabhayisikili abaphambilibheka ukudicilela phansi kusuka emithwalweni yokuqeqesha yokujezisa ngebhayisikili ngesikhathi se-inkathi.15.01.2019
Kufanele ngiyeke ukuqeqeshwa isikhathi esingakanani ngaphambi komjaho womjikelezo?
KuhleukuqeqeshwaUhlelo luhambisa okubalulekile kokugcinaukuqeqeshwaumfuthokudengokwanele ukuphuma kumcimbi wakho wegoli ukuvumela kokubili ukuzivumelanisa nesimo nokubuyiselwa okuphelele. Kwabaningi be-amateurabagibeli bamabhayisikili, lokhu kusho okujwayelekileukuqeqeshwa kufanele kuyekeIzinsuku eziyi-7-10 kusuka kumcimbi wakho futhi zilandelwe nge-taper emfushane.
Wake wazibuza ukuthi izinzuzo zingena kanjani kumumo wazo wethiphu phezulu? - Kulesi sihloko sizohlola izindlela zakudala nezintsha ezibenze bathola ukuma okuphezulu, usukulungele ukuzizama? - Kungcono udonse lezi zikibha ungene egiyeni lami kuqala. - Yebo, masimenze asheshe. (Bass-Pump-Beat) Manje ake siqale ngomunye wamanje wesilingo somhlaba wonke sokulingwa uRohan Dennis.
Manje ungitshela ukuthi wenza umngani owagcwalisa amashubhu akhe ngamanzi ukudala ukumelana nesisindo. Kwathi lapho evutha isondo, wazama ukufihla amanzi ayeshayeka yonke indawo ngezandla zakhe. Yebo.
Akusebenzanga kahle kangako. (Bass throbbing beat) - UHank usanda kukhuluma noMatej Mohoric, onqobe isiteji eVuelta naseGiro, ukuze afunde izimfihlo zakhe zokuqeqesha. Futhi ukuqonda asinike khona ukuthi lapho eqeqeshwa uzohlala ekhetha ukuma okulula kakhulu kanye nemishini esheshayo engaba khona.
Lokhu kungenxa yokuthi uzimisele kakhulu ukusunduza ngamandla futhi ngokushesha lapho eziqeqesha nalapho egibela ku-re. Ngisho namathuluzi nezinsimbi aziphethe naye kuzoba lula ngangokunokwenzeka. Waze waze wagibela ibhayisikili lakhe lokuqeqesha ngamashubhu e-latex.
Kodwa uvumile ukuthi ukubapompa nokulungisa amazinga okushisa nsuku zonke sekukhathaze kancane. Matej, ngiyasithanda isitayela sakho. (IBass ishaya ngamandla) - Ngakolunye uhlangothi lukaMatej Mohoric, uMagnus Backstedt, owinile eParis-Roubaix, uqeqeshwe ngebhayisikili elinzima kunawo wonke abengathola kulo; Ubuye wayisebenzisa ukugcwalisa amabhodlela akhe ngomthofu ukuze aziqeqeshe kakhulu.
Uhlanya. (Upbeat piano) - U-Lizzie Deignan wathintana nokusitshela ukuthi imfihlo yakhe yokuqeqesha ukuthi uzoqala ukuqeqeshwa ngoNovemba 1. Kodwa-ke, uwine Ungasebenzisi imitha yamandla ebhayisikili lakhe kuze kube nguDisemba 1.
Lokhu kumnika isikhathi esihle samaviki amane ukuthola kabusha ukuxhumana okuhle nebhayisikili, ukunyathela kancane, futhi empeleni kumqinise kancane lapho ayekhona ngaphambi kwesikhathi sokuphumula. Okusho ukuthi lapho imitha yamandla iboshelwe ibhayisikili lakho le-uh, kuzokwehlisa amandla kakhulu. Mhlawumbe kulapho ukuzethemba kwabo kuvela khona. (IBass ishaya ngamandla ukushaya) - Ngikwazile ukufinyelela kulowo ebengidlala naye u-Adam Blythe ukuthola ukuthi unemfihlo yini.
Futhi wathi kimi uzoshayela amahora amahlanu endaweni yesithathu, ugcine iketanga liboshiwe. Ungakunaki ukusebenza, kepha qiniseka ukuthi uyagcina lokhu. Futhi uthi leyo yimfihlo yakhe uGeoghegan Hart, othe isikhathi sakhe sokuqeqesha esibaluleke kakhulu nemfihlo yakhe yokuphumelela ukuhamba ngebhayisikili imizuzu engama-90 nje kuphela.
Futhi kuba ngcono nakakhulu. Ukuhamba kwakhe ngebhayisikili kwenziwa ngesilinganiso senhliziyo sokushaya okungu-85 kuya ku-90 ngomzuzu kubonakala kungakholeki. Lokho akwenzayo ngemuva kwemizuzu engama-40, azungeze amakhilomitha angama-25 ngehora futhi angabi ngaphezu kwamamitha ayi-100 ukuphakama, ikhefu elide ngenkathi ephuza ikhofi endaweni yokudlela.
Sasimangele ngakho. Ungakulungela njengomgibeli wamabhayisikili weWorld Tour ngokuphuza ikhofi. Yebo, lokhu ngokusobala akusona isikhathi sakhe esiyinhloko sokwakha izinguquko zokuqina komzimba, kepha wusuku lapho umzimba wakhe ululama khona futhi uqina ngenxa yalokho.
igatorade vs amanzi
Futhi kuqhakambisa ngempela ukubaluleka kokunakekela ukululama kwakho. (I-Bass-Pump-Beat) - Manje imfihlo yami yokuziqeqesha yayingamakhono emoto. Nginobaba, i-moped endala, makahlale kuyo amahora amathathu, futhi ngihlala ngihlala ngemuva kwakhe ngizama ukulingisa ijubane le-peloton.
Futhi lokho kwangisiza kakhulu ukusheshisa imilenze yami. Futhi naku-sprint. Ukuphrinta kusuka ku-40 50K ngehora.
Lokho kuyimfihlo. Ungatsheli abantu abaningi kakhulu. (IBass pounding beat) - Yilapho kanye lapho imfihlo yami ebaluleke kakhulu yokuziqeqesha ingeyona leyo mfihlo nakancane.
Ngiyi-nerd ephelele yokuqeqesha futhi bengilokhu ngilayisha njalo ohambweni olulodwa kungxenyekazi ye-carpooling online iminyaka. Qagela ukuthi iyiphi. Kepha lapho sengithole ukuthi umthwalo wama-kilojoule ayi-1 000 ngehora ulinganiselwa kuma-watts angama-280, lezo zinombolo zathakazelisa. 85 kuya ku-90 kwakuhlala kuyisihluthulelo.
Ekugibeleni kwami ​​amahora amahlanu kuya kwayisikhombisa okukhuthazela, bengihlala nginamathela kuleyo nombolo. Ngokwengxenye ngoba yayiphezulu phezulu kweZone 2. Kodwa nangenxa yokuthi ingenze ngazizwa kahle ngoba ngangazi ukuthi ngishisa ama-kilojoule ayi-1 000.
Futhi ngingasho kugcwale umlomo ukuthi, njalo uma ngenze into enjengale, emasontweni amabili kuya kwamathathu alandelayo ngihlale ngiwina umjaho, ngakho lokho kwanginika umfutho omuhle wokuzethemba futhi - ngiyethemba lokho kukunikeze okuncane of a boost Kunikezwe ukuqondisisa kokuthi izinzuzo ziphi. Cabanga ngemilenze emihle okuqinisekisiwe, kubhale emazwaneni angezansi. Singathanda ukuzwa ngakho. - Futhi unikeze le ndatshana isithupha esikhulu, uma kuphela kulowo mbono.
Bheka. - IMont Blanc lapho. - Kuyamangalisa.
Ingabe abagibeli bamabhayisikili abathatha isikhathi bayathatha ikhefu?
Noma kunjalo, cishe konkeizinzuzo zithathaikhefu kukuvaliwe-isikhathi. Impela minathathaamasonto ambalwakuvaliwe, kusho uTed King (Cannondale). Imvamisa sengiqedile ukugijima ngasekupheleni kukaSepthemba.
Ingabe kufanele ngithathe ikhefu ekugibeleni ibhayisikili?
Ukubuyisela ibhalansi yempilo yebhayisikili
Ukuthathaamasonto ambalwa 'ukuphukaikuvumela ukuthi ubuyele emuva kulowo mhlaba futhi ikusize ukuthi uphinde wakhe ibhalansi yempilo yebhayisikili nempilo. Futhi-ke, lapho uqala ukubhoreka ngalelo 'zwe langempela', wenakufanele ithatheIsikhathi sokucabanga ngalokho okufundile kwisizini edlule nezindawo zokwenza ngcono.
Kufanele uphumule izinsuku ezingaki ngaphambi kwe-triathlon?
Isu eliyimpumelelo ukususa ezimbiliizinsuku ngaphambiumjaho wokuukuphumula. Qedela ukujima kwakho kokugcina ngosukungaphambiumjaho. Kulolo hlelo lokuzivocavoca, uma kungenzeka ukubhukuda enkundleni yomjaho, zama ukungena emanzini ngasikhathi sinye igagasi lakho lokubhukuda lizosuka ngosuku lomjaho.
Ngabe amaqanda alungele abagibeli bamabhayisikili?
Ukudla kwasekuseni okunamafutha aphezulu futhiAmaqanda
Amaqandakuyindlela enhle yokudla okunempilo ngokujwayelekile, kepha uma ucindezelwe isikhathi, nikeza ukudla okunamafutha namaprotheni (okungukuthi, noma yini eyenziwe ngebhekoniamaqandaukudlula.1. 2021.
Ngabe ukuhamba ngebhayisikili izinsuku ezi-7 ngeviki kubi?
Ngokuya ngocwaningo, ihora eli-1 le-cardioIzinsuku eziyi-7 ngevikiayisebenzi kahle uma iqhathaniswa nemizuzu engama-30 ye-cardioIzinsuku eziyi-7 ngeviki. Ungayenza iphumelele nakakhulu ngokwenza kokubili ukuqeqeshwa kwe-cardio nesisindo sokunciphisa umzimbaIzinsuku eziyi-7 ngeviki. Le nhlanganisela ngeke inciphise amafutha omzimba kuphela kepha futhi izokwakha ubukhulu bemisipha7).22. 2021.
Ingabe ukuhamba ngamabhayisikili amamayela ayi-100 ngesonto kuhle?
Akukuhle neze, kepha kuzokunikeza izinga elifanele lokuqina futhi ngiyaqikelela ukuthi ungaqedelaIzinkulungwane eziyi-100ngaphandle kobunzima ukuhlinzeka akuyona inqwaba yamagquma. UHerbsman ubhale wathi: Zama ungene ku-80-100ngosuku olulodwa ngempelasonto, futhi amabili kuya kwamathathu 30-40imayelaugibele kwezinye izinsuku ze-isonto.
Kuqeqeshwa kanjani amandla kubashayeli bamabhayisikili?
Uhlelo lokuqeqeshwa kwamandla okuhamba ngebhayisikili lungahle lwehliselwe ezikhathini ezilandelayo unyaka wonke - ukujwayela i-anatomical, amandla amakhulu, ukukhuthazela kwemisipha, kanye nesikhathi sokugcinwa.
Isigaba sokukhuthazeka kwemisipha siqala nini kubagibeli bamabhayisikili?
Lesi sigaba sizoqala ngasekupheleni kwesikhathi esiyisisekelo futhi singafakwa emijahweni yakho yesizini yokuqala, ngaphambi kokudlulela esigabeni sokulungisa unyaka. Isigaba sokukhuthazeka kwemisipha yisigaba samandla esibaluleke kakhulu kubo bonke abagibeli bamabhayisikili. Lesi sigaba sigcizelela imetabolism ye-aerobic.
Ungasifaka nini isigaba samandla amakhulu kubhayisikili?
Isigaba se-MS kufanele sifakwe phakathi kwamasonto ambalwa okuqala esikhathi sakho sokwakha isisekelo nangaphambi kokusebenza isigaba sokukhuthazeka kwemisipha. Ukufaka isigaba samandla amakhulu kumuntu ohamba ngebhayisikili kunezinzuzo ezimbalwa ezibalulekile. Ukuphakamisa imithwalo ephezulu kudinga amandla amakhulu okuholela ekutholakaleni okukhulu kwemicu yemisipha.